Sports – Page3– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
काठमाडौं । यूएईमा जारी टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा यूएईले नेपाललाई १०८ रनको विजय लक्ष्य दिएको छ । आईसीसी क्रिकेट एकेडेमीमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको यूएईले १९.२ ओभरमा अलआउट हुँदै १०७ रन बनाएपछि नेपालले समान्य चुनौती पाएको छ । यूएईका लागि ओपनर सीपी रिजवनले सर्वाधिक ४४ रन बनाउँदा ४ चौका र १ छक्का प्रहार […]
जोराले बनाए आफ्नो डेब्यू खेलमै कीर्तिमानी
काठमाडौं । नेपाली युवा ब्याट्सम्यान सन्दीप जोरा अन्तर्राष्ट्रिय टि–२० खेलमा अर्ध सतक प्रहार गर्ने कान्छो खेलाडी बनेका छन् । संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई) विरुद्ध बिहीबार दुबईमा भएको पहिलो टी–२० खेलमा ४६ बलमै अबिजित ५३ रन प्रहार गर्दै जोराले नयाँ कीर्तिमान हात पारेका हुन् । उनले १७ वर्ष एक सय तीन दिनको उमेरमा टी–२० खेलतर्फ अर्धसतक […]
काठमाडौं । धुुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको घोषणा गरेको छ । रंगशाला निर्माणको लागि फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच जग्गा प्राप्तिसम्वन्धी सम्झौता भएको छ । भरतपुर–१६ रहेको यो जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको र हाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले भोगचलन गरिरहेको थियो । क्रिकेट रंगशाला बनाउने भएपछि भरपुर महानगर हुँदै फाउन्डेसनलाई उपलब्ध गराएको […]
Posted in: mainNews, National News, Sports
यूएईविरुद्धको टी–२० सिरिज भोलिबाट, के छ नेपालको स्थिति ?
काठमाडौं । नेपालले यूएईसँगको एकदिवसीय सिरिजमा २–१ ले जितेसँगै अब यूएईसँगै टी–२० सिरिज भोलीबाट खेल्ने छ । तर यो टी–२० सिरिज भने नेपालको लागि त्यति सहज छैन । किनभने यूएईका ब्याट्सम्यानहरु ठूलो सर्ट मार्न माहिर देखिएका छन् । उनीहरुको विष्फोटक ब्याटिङ क्षमता हामीले तेस्रो एकदिवसीयमा देख्यौं । उनीहरुले तेस्रो एकदिवसीयमा ४७ रन जोडेर ४ विकेट गुमाएको […]
नेपाल पहिलो पटक आइसिसीको एकदिवसीय बरियतामा, को छ त शीर्ष स्थानमा ?
काठमाडौं । नेपाल पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) को एकदिवसीय क्रिकेटको बरियतामा समावेश भएको छ । युएइमा भएको तीन खेलको एकदिवसीय सिरिजमा घरेलु टोली युएइलाई २–१ ले हराएपछि नेपाल पहिलो पटक एकदिवसीय क्रिकेट बरियतामा समावेश भएकाे हाे । यसअघि नेपालले नेदरल्याण्डसँग पहिलो एकदिवसीय सिरिज खेलेको थियो जसमा नेपाल १–१ ले बराबरी भएको थियो । […]
युएईलाई हराउँदै नेपाल विजयी
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटर टिमले एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज जितेको छ । दुबईस्थित आईसीसी एकेडेमीमा सोमबार भएको निर्णायक खेलमा नेपालले युएईलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै २–१ ले पहिलो पटक जित हात पारेको हो । यसअघि सम्पन्न भएको पहिलो खेलमा युएई ७ विकेटले विजयी भएको थियो । दोस्रो खेलमा भने नेपाली टिमले निकै मेहनत गरेपछि १ सय […]
नेपालको ब्याटिङमा आएन सुधार, यूएइ सामू ११४ रनको झिनो लक्ष्य प्रस्तुत
काठमाडौं । यूएइ विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले कमजोर ब्याटिङ प्रस्तुत गरेको छ । टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले ३३ दशमलव ५ ओभरको खेल खेल्दा सबै विकेट गुमाई ११३ रन मात्र बनायो । नेपालका लागि सर्वाधिक ३० रनको योगदान सोमपाल कामीले दिए भने कप्तान पारस खड्काले २०, आरिफ शेखले २४ र सन्दीप […]
काठमाडौं । थाइल्यान्डमा जारी टी–२० महिला स्माश क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपालले आफ्नो स्थान पक्का गरेको छ । जारी प्रतियोगिता भरी आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राख्दै नेपालले इन्डानेसियालाई ९२ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो । नेपालले उपाधिका लागि आजै हुने आयोजक थाइल्यान्ड र यूएईबीचको बिजेताले भोली खेल्नेछ । नेपालले दिएको १ सय २० रनको लक्ष्य […]
सलाहले जोगाए लिभरपुललाई, ब्रिगटोन १–० ले पराजित
काठमाडौं । जारी इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडरको रुपमा रहेको लिभरपुलले शनिबार राति भएको खेलमा कठिन जित हात पारेको छ । ब्रिगटोनसँग भएको उक्त खेलमा लिभरपुलले १–० को नतिजा निकालेको हो । सुरुवाती समयदेखि नै दबावमा राखेको लिभरपुलले फराकिलो गोलअन्तरले भने जित हात पार्न सकेन । लिभरपुलको जितमा मोहमद सलाहले गोल गरे । पहिलो […]
काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीले विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको तलब पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)को विशेष पहलमा खेलाडीले उक्त पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउन लागेको हो । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भित्र साधारणसभा तथा नयाँ नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर भएको उग्र विवादले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले २०७३ वैशाखमा क्यानलाई निलम्बन गरेपछि […]